I-China I-China I-Lathe Ephendula Ubuso Ezintathu yefektri yomzimba ye-Valve nabakhiqizi |I-Oturn
Umshini we-Lathe wokuvula
Umshini we-CNC okhethekile weValve usetshenziswa kakhulu ekucubunguleni iValve, umzimba wePump, izingxenye ze-Auto, izingxenye zemishini yokwakha njll.
Ithuluzi Lomshini We-CNC elinamakhanda amathathu elizenzakalelayo
Umshini okhethekile we-Huadian CNCI-Valve isetshenziswa kakhulu ekucubunguleni i-Valve, I-Pump body, izingxenye ze-Auto, izingxenye zemishini yokwakha njll.Ingasebenzela izinqubo eziningi, isibonelo, Ubuso bokuphela, Umbuthano wangaphandle, Unqenqema lwangaphambili,Imbobo engaphakathi, I-grooving, intambo yesikulufu, i-Bore. -hole kanye ne-Sphere.Isebenze ne-Huadian CNC Controller (noma i-Siemens, i-Guangzhou CNC Controller), Ingakwazi ukubona ukuzenzekelayo, ukunemba okuphezulu, ukuhlukahluka okuningi nokukhiqizwa okukhulu.
(1)Imishini yethu yonke iphakela nge-Huadian CNC Controller (noma i-Siemens, i-Fanuc), ingafinyelela ukuxhumana okuphindwe kabili kokuphotha bese iqedela ukucubungula i-Bore-hole, intambo yesikulufu kanye ne-Sphere.Isilawuli se-CNC sinokuhambisana okuhle, umsebenzi onamandla nokusebenza okulula.
(2) Umhlahlandlela wetafula Elishelelayo Lokuphakelayo usebenzisa insimbi yokuphonsa yekhwalithi ephezulu empunga, ukubunjwa okungalungile, ukushisisa kanye nokwelashwa kokuguga izikhathi ezintathu.Susa ngokuphelele ingcindezi yangaphakathi eyinsalela, Ingaphezulu lendlela yomhlahlandlela isebenzisa ukucishwa komsindo omkhulu futhi ukuqina kufinyelela ku-HRC55.Ngokusebenzisa ukunemba okuphezulu kwe-grinder processing, ukuqinisekisa ukunemba, ukuqina, ukuzinza.
(3) Ingxenye yokudlulisela isebenzisa isikulufu esinembayo sebhola kanye nokufakwa ukuze kuqedwe igebe, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukushayela komshini kuzinzile.
(4) Ikhanda lamandla lifakelwe ukushintshwa kwejubane lemanuwali elinezitezi ezintathu ezinenjini enamandla, ifinyelela isivinini esiphansi kodwa i-torque ephezulu, ingamelana nomthwalo osindayo wokusika, ithuthukise ukusebenza kahle kokucubungula.
(5)Izinto zokusebenza zamukela i-Hydraulic pressure-automatic clamping, ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kanye nokunciphisa umfutho wabasebenzi.
(6) Umshini usebenzisa ukuthambisa okumaphakathi, ukuqinisekisa ukuthi ukugcotshwa okugcwele kwezingxenye ezinyakazayo bese kuthuthukisa impilo yesevisi yomshini.
Umshini wethu wakhiwe ikakhulukazi umzimba, ikhanda lamandla, itafula le-CNC feed sliding, i-CNC cross-feed cutter, imishini ye-Hydraulic pressure, futhi ifakwe ikhabethe likagesi elizimele, isiteshi samanzi, idivayisi yokugcoba ephakathi nendawo, idivayisi yokupholisa i-chip ezenzakalelayo, kanye nedivayisi yokuvikela ephezulu.
Umzimba wamukela umzimba wokulingisa odidiyelwe onekhwalithi ephezulu, ukufudumala udoti okwenziwa ngesandla kanye nokwelashwa kokuguga izikhathi ezintathu.Ingaphezulu lendlela yomhlahlandlela iphathwa ngokucishwa komsindo omkhulu, isakhiwo sinengqondo, ukuqinisekisa ukuqina, ukunemba kanye nokuzinza komshini.
Umzimba wekhanda lamandla wamukela ukusakaza okuhle kakhulu, ukusetshenziswa kwe-spindle 20GrMnTAi, ene-forging, tempering, carburizing kanye nokucisha, ukunemba okuphezulu kokugaya ngaphandle nangaphakathi. I-bearing yamukela uchungechunge lwe-NN30 olunemba eliphakeme elinemigqa eyi-cylindrical roller yokuqinisekisa ukuqina nokunemba kwe intambo yokuphotha.
I-fixture yakhelwe ngokukhethekile i-workpiece.Ibhulokhi yokubeka kanye nephinikhodi yokumisa iyacinywa, ukuze kuqinisekiswe ukuma okuthembekile kwe-workpiece.IHydraulic ibambe isiqeshana somsebenzi, ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokucubungula, ukunciphisa umfutho wabasebenzi.
Iisiteshi se-hydraulicyamukela i-valve ye-Superposition ezimele, eyakhiwe ngevalvu yekhwalithi ephezulu kagesi, ivalvu elawula ukucindezela, i-throttle valve kanye nepompo ye-vane ephindwe kabili.Futhi ifakwe idivayisi yokupholisa umoya ukuze kuqinisekiswe ukuthi isiteshi se-hydraulic sinezinga lokushisa elivamile likawoyela uma sisebenza.
Ikhabhinethi kagesi izimele futhi ivaliwe.Ifakwe nesilawuli se-CNC, i-Inverter nezingxenye zikagesi.Futhi setha idivayisi yokupholisa umoya ukuze uqiniseke ukuthi izingxenye zikagesi zomshini zisebenza kahle, alukho uthuli.
(6)Ithuluzi lokuthambisa eliphakathi nendawo
Uhlelo Lokugcoba olufakwe idivayisi yokugcoba eqhubekayo ye-Nanjing Beiqier, lumpompa uwoyela wokugcoba ezingxenyeni ezihambayo njalo.Gwema ukusebenza kwezandla okuyisicefe, thuthukisa impilo yamathuluzi omshini.
(7)Idivayisi yokupholisa ikhipha idivayisi
Lo mshini we-Valve CNC wamukela ukupholisa okunamandla okugeleza, Ama-chips ensimbi ahlanjululwa ngamanzi apholile ukuze ageleze kumshini wokukhipha i-chip ngokusebenzisa i-chip ekhipha umlomo womshini womshini.Ama-Chips agcinwa ebhokisini elilodwa ukuze kuqinisekiswe ukuhlanzeka kwethuluzi lomshini futhi kunciphise. umfutho wokusebenza
(8)Isilawuli se-CNC Esenziwe ngezinto eziningi
Lo mkhiqizoidivayisi ye-CNC yekhwalithi ephezuluIhambisana nawo wonke amabhasi edijithali.Ihlala inolwazi ngesilawuli se-CNC sezinga eliphezulu laphesheya, ithatha ukwakheka komshini ongaphezulu naphansi usebenzisa i-double CPU module, i-modular ne-open architecture, esekelwe kubuchwepheshe be-NCUC yezimboni ze-fieldbus enamalungelo azimele empahla yobuhlakani.Inemisebenzi yobuchwepheshe bokulawula iziteshi eziningi, i-axis machining emihlanu, isivinini esikhulu nokunemba okuphezulu, i-turning milling compound kanye nokulawula okuhambisanayo, kusetshenziswa isikrini se-LCD se-15 'LED.Isetshenziswa kakhulu ngesivinini esikhulu, ukunemba okuphezulu, i-axis eminingi, iziteshi eziningi eziqondile, isikhungo semishini esivundlile, isikhungo sokujika nesokugaya, umshini we-axis gantry ongu-5, njll.
Idaya yekhanda lamandla.(mm)
Ubude bomshini obuningi(mm)
I-Spindle Center Hight(mm)
Isivinini se-Spindle-Gear engenasinyathelo (r/min)
Okwedlule: Uhlobo lwe-Gantry Umshini Wokubhoboza Nowokugaya we-CNC
Olandelayo: I-Manual Pipe Threading Lathe Manufacturer
Umshini Wokubhoboza Ohlangothini Olulodwa
Ukuphenduka Nokugaywa Kwevaluvu Yevemvane